Kwụsị ịsị na Ntị Ntị na-ebelata, ha abụghị! | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 23, 2014 Tọzdee, Disemba 23, 2014 Douglas Karr
Anyị hụrụ ihe ụtọ ụtọ dị ka onye ọzọ, mana m kwenyere na enwere nnukwu nghọtahie na ụlọ ọrụ anyị. Echiche ahụ Oge nlebara anya na-agbada chọrọ ụfọdụ onodu tinyere ya. Nke mbụ, ekwenyeghị m na ndị mmadụ na-etinye obere ume ịkụziri onwe ha ihe banyere mkpebi ịzụta ha ọzọ.
Ndị ahịa na azụmaahịa ndị nọrọ ogologo oge tupu ha emee nyocha ka na-eme ọtụtụ nyocha ugbu a. M gbara ọsọ nchịkọta akụkọ gafee ndị ahịa anyị niile na nkwadebe maka post a na oge ọ bụla nwere oge ka ukwuu na ibe ma oge ka ukwuu ejiri oge ọ bụla jiri ya tụnyere 1 ma ọ bụ 2 afọ gara aga. Anyị na-eme nyocha miri emi banyere ọdịnaya ma hụ nloghachi kachasị mma na itinye ego na miri emi anyị na-aga.
Ihe agbanweela abụghị oge nlebara anya, ọ bụ mbọ dị na ịchọta ọdịnaya. Ndị na-eme nchọpụta na-amata ngwa ngwa ịmata ihe ha na-achọ. Ọ bụrụ na ha ahụghị ya, ha na-apụ. Mana ọ bụrụ na ha achọta ya, ha na-etinye nnọọ oge dị ka ịgụ, nyocha na ọbụnadị ịkọrọ ya.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ahụ nnukwu ọdịda nọrọ na oge na ibe ma ọ bụ saịtị, ọ nwere ike ịbụ maka ọtụtụ ebumnuche:
Isi okwu gi adabaghi ​​na ọdịnaya gi. Ikekwe ị na-eji usoro njikọ maka ịrata ndị mmadụ ma ọdịnaya ahụ enweghị ọgaranya - nke ga - eme ka onye ọ bụla pụọ!
Been na-na optimizing maka adabaghị ọdịnaya. Chọta saịtị gị maka ụda nke nchịkọta isiokwu na ị nweghị ikike na ya nwere ike ime ka ọnụego gị bulie ma belata oge ejiri na saịtị gị. Dee ihe ị chọrọ - oge ọ bụla!
Na-akwalite site na mgbasa ozi ọchụchọ akwụghị ụgwọ kachasị. Ọbịa ọhụụ ọhụụ ọ bụla na saịtị gị nwere ike iwepụ obere oge karịa ndị na-alọghachi. Turngbalite mkpọsa ahụ nwere ike ịnwelata oge na saịtị ka ndị ọbịa ọhụụ chọtara (ma ọ bụ ịchọtaghị) ihe ha chọrọ.
Naghị etinye ego na atụmatụ ọdịnaya nke na-eme ka itinye aka na miri emi - dị ka infographics, ngosi, ebook, whitearies, ikpe ọmụmụ, nleba anya, vidiyo na-akọwa, ngwaọrụ mmekọrịta, wdg.
Enweghi ike inweta ọdịnaya abụghị ihe ị ga-etinye n'ihi na oge nlebara anya na-ebelata (ha abụghị!). Ihe oriri na-eri nri bụ achịcha na-eduga ndị mmadụ na saịtị gị na isiokwu ndị dị mkpa ka ha wee nwee ike ịchọta njikọ miri emi na ozi ha na-achọ.
M ga-agba gị aka ka ị mee nyocha nke mgbanwe na oge na ibe ma ọ bụ saịtị ma ị ga-ahụ na ọdịnaya ndị na-agbanwe na-abụ ọdịnaya dị ogologo. Nchoputa mbu, akwukwo ocha, ihe omumu na ihe omuma, ihe omuma nke juputara na ozi na-aga n'ihu na-agbanye ton nke aka ma na-eduga na mgbanwe.
Zụlite gị usoro ahia ahia kwesịrị ịgụnye iwu ọdịnaya maka ọkwa dị iche iche nke na, ka onye na-azụ ahịa ma ọ bụ azụmahịa na-enwekwu mmasị, ha nwere ike ịmikwu n'ime nyocha ha chọrọ.
Ihe oriri na-enye nri nwere ọnọdụ ya, mana ọ bụghị maka obere oge elebara anya. Ọ bụ maka ntakịrị mgbalị na ndị na-ege ntị na-adọta ndị ọbịa n'ime miri emi! Ọ na-chumming mmiri mgbe ezigbo nri idide na-eche n'ihu gị iche.
N'iburu nke ahụ n'uche, ihe ọmụma a sitere na Oracle nwere ezigbo nghọta n'ime usoro ọdịnaya nke snackable.
Tags: infographicOracleọdịnaya snackableogeoge na peejioge na saịtịoge ejiri na ogeoge ejiri na ibeoge ejiri na saịtị
Dee 24, 2014 na 8: 59 AM
Obi dị m ụtọ ịnụ na ndị ọbịa weebụ na-etinyekwu oge n'ịmụ peeji ndị ahịa gị karịa ka ha dị 1 - 2 afọ gara aga. N'ụwa nke oge a na-ata ụda, nke ahụ na-adabara anyị ndị kwenyere na itinye oge iji mepụta ọdịnaya echebara echiche, nyochara nke ọma!
Dee 29, 2014 na 9: 56 AM
Nke a amaka! Obi dị m ezigbo ụtọ na mkpa ọ bara ọgaranya nke ọmụma bara ụba, ụdị ogologo oge anaghị ebelata.
M hụrụ ya n'anya mgbe mmadụ na-ekwu ihe pụrụ iche na nkwuwa okwu na-agbagha echiche ndị a ma ama